धैर्यता नै व्यवसायिक सफलताको सूत्र ! – HamroKatha
धैर्यता नै व्यवसायिक सफलताको सूत्र !
सारंग बेकरी एण्ड कफी सपका संस्थापक मनोज सुनुवारसँग कुराकानी
हाम्रो कथा २०७५ पुष २७ गते १७:४३
डी.एक्स.एन हेल्थ एण्ड हर्बल प्रोड्स्क्ट विशेष गरी मधुमेहलाई सुहाउदो चिया, कफी र अन्य खाद्यान्न र सौदर्यका सामग्रीहरु उत्पादन तथा नेटवर्क मार्केटिंगको एक विश्व व्यापी ब्राण्ड हो I
प्रश्न: तपाईले कहिले र कसरी सारंग बेकरी सपको सुरुवात गर्नु भयो?
मनोज सुनुवार: करिब डेढ वर्ष पहिले हामी चार जान साथी बिच स्वदेश मै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले व्यापार गर्ने योजना बनायौं I त्यसमा पनि के गर्ने त भन्दा रेस्टुरेण्ट गर्ने सल्लाह भयो। पछि कारण बस हामी सहकार्य गर्न नसक्ने भयौ। म एक्लिए I तर पनि नेपाल मै केही गर्छु भन्ने पहिले देखी नै थियो। तब मैले सीटीईभिटि (CTEVT) बाट बेकरी तालिम लिए। अनि यसो सोच्दा बेकरी र कफ को बजार पनि राम्रो देखे I करिब डेढ वर्ष अघि यो व्यवसायको सुरु गरे।
प्रश्न: डेढ वर्ष सम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?
मनोज सुनुवार: जति सोचेको थिए त्यतिसम्म त भएको छैन । काम गर्नु अघि जसरी सोचेको थिए काम गर्दै जाँदा अलि अर्कै जस्तो हुँदो रहेछ । गाह्रो पनि हुँदो रहेछ । तर सबै भन्दा सिक्ने कुराहरू चाहिँ धेरै नै रहेछन् । धेरै कुरा त सिक्दै छु ।
प्रश्न: कफीलाई नै महत्त्व दिएर व्यवसाय रोज्नु को कुनै विशेष कारण छ कि ?
मनोज सुनुवार: विश्व भरि कफी; पेट्रोल पछि खपत हुने दोश्रो तरल पदार्थ हो । बढ्दै गरेको यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजार र हाम्रै पनि बजार सँगै खास गरी यो पाटन दरबार स्क्वायर चाहिँ बिदेशीहरूको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र भएका कारण र बुवा डी.एक्स.एन प्रोड्स्क्टसँग काम गरिरहनु भएको भएर नै मैले कफीलाई नै महत्त्वमा राखेर काम गरे।
प्रश्न: कामगरी सकेपछिको अनुभवमा कफीको बजारले हाम्रोमा कस्तो सम्भावना बोकेको पाउनुभयो ?
मनोज सुनुवार: ठाउँ नै हेर्नु पर्ने हुदोरहेछ त्यस विषयमा चाहिँ । जस्तो कि यो पाटन दरबार स्क्वायर जस्तो बढी बिदेशी तथा स्वदेशी पनि धेरै नै आउने पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा त एकदमै राम्रो छ।
प्रश्न: हाम्रोमा युवाहरू का निम्ति व्यावसायिक चुनौतीहरू के-के रहेछन् ?
मनोज सुनुवार: विशेष गरी हाम्रोमा युवाहरूलाई केही गर्छु भन्दा धेरैका निम्ति चाहिँ परिवारले नै साथ दिँदैन जस्तो लाग्छ । त्यसमा पनि पैसाको कै समस्या हो । आफै सँग लगानी गर्ने पैसा त हुने भएन किन भने उ त भर्खरै केही गर्न खोज्दै छ । मेरो बुझाईमा चाहिँ यही नै छ। केही गर्न खोज्ने र सिप भएका युवामा व्यवसायका निम्ति लगानीको कमी छ। अनि आवश्यक समानहरू पनि सही समयमा प्राप्त गर्न पनि गाह्रो छ ।
प्रश्न: तपाईका ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया कस्ता प्रकारका रहने गर्छन् ?
मनोज सुनुवार: राम्रो छ । आफ्नाले राम्रो भनी हाल्नुहुन्छ स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि विदेशीहरूको पनि अधिकांश सकारात्मक प्रतिक्रिया नै रहन्छ । जसले अझै काम गर्दै जान उत्साह र जोस दिन्छ।
प्रश्न: व्यावसायिक अनुभव पश्चात् यहाँको बुझाइमा व्यवसाय भनेको चाहिँ के रहेछ ?
मनोज सुनुवार: मेरो बुझाइमा व्यवसाय भनेको जुनुनबाट जन्मिएको व्यवहारिक सन्तुष्टि हो । चाहे त्यो काम ठुलो होस् या सानो होस् I त्यो कामबाट फाइदा या नाफा भन्दा सन्तुष्टि नै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ।
प्रश्न: व्यवसायमा सफलताका सूत्रहरू चाहिँ के के रहेछन् ?
मनोज सुनुवार: मेरा निम्ति सफलताको सूत्र त धैर्यता नै हो जस्तो लाग्छ । सँगै आफ्नू व्यावसायिक क्षेत्रका मानिसले के कुरा खोजिरहेको छ त ? यो चाहिँ बुझ्न सक्नु पर्‍यो । समाजको समय सापेक्षित माग अनुरुपको काम रोज्नु पर्‍यो र त्यसमा धैर्यता राख्न सक्नु पर्‍यो।
प्रश्न: डी.एक्स एन. प्रोडक्ट नै रोज्नु को कारण?
मनोज सुनुवार: यो प्रोडक्टमा रातो च्याउ, यार्चागुम्बा जस्ता जडिबुटी प्रयोग भएको हुन्छ I जुन हाम्रो शरीरका निम्ति अत्यन्तै फाइदाजनक रहेकोले यसलाई नै मैले व्यावसायिक हिसाबले रोजेको हुँ ।
प्रश्न: युवाहरूलाई व्यवसायमा प्रोत्साहन का निम्ति केही भन्न चाहनु हुन्छ?
मनोज सुनुवार: पैसा कमाउनु मात्र त ठुलो कुरो हैन। विदेश गएर पनि पैसा कमाउन सकिन्छ । हाम्रोमा पनि अनेकौँ सम्भवनहरु छन्। मुख्य कुरो चाहिँ हामी आफू बचिरहेको समाजलाई बुझ्न सक्नु पर्छ I त्यहि समाजमा रहेर आफूसँग समाजलाई कसरी सही दिशा दिन सकिन्छ ? यही अनुरूप काम गर्न खोज्नु पर्छ । जसले हामी आफू सँगै समाजलाई क्रियाशिलाताको बाटो हुँदै सफलताको उचाइ तिर लैजान्छ ।
(सारंग बेकरी एण्ड कफी सपका संस्थापक मनोज सुनुवार सँग ईश्वर लुईटेलले गरेको कुराकानी)